Alps-ka Scandinavianka: astaamaha, asalka iyo buuraha | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 29/03/2021 09:57 | Geology
ka buuraha skainaviyanka Kuwa ugu muhiimsan waxay ka tirsan yihiin Jasiiradda Scandinavian-ka waxayna ku yaalliin waqooyi-bari Yurub. Aaggan oo dhan wuxuu ka kooban yahay Norway, Sweden iyo qayb ka mid ah Finland. Buuraha Scandinavia waxay caan ku ahaayeen taariikhda oo dhan mar kasta oo tixraac laga sameeyo wadamada Waqooyiga Yurub. Qiyaastii 25% ka mid ah jasiiradda oo dhan waxay ku jirtaa wareegga Arctic. Waa silsilad buur ah oo ku socota dhammaan jasiiradda Scandinavianka laga bilaabo woqooyi-bari ilaa koonfur-galbeed 1700 kiiloomitir.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, asalka iyo cilmiga dhulka Alps ee Scandinavian-ka.
2 Alps-ka Iskandaneefiyanka iyo jasiiraddiisa
3 Alps-yada isdabajooga ah
Waa silsilad buuraley ah oo ka dhexeysa Jasiiradda Scandinavianka oo dhererkeedu dhan yahay 1700 kiiloomitir. Waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood iyadoo kuxiran waxaad kala saartey. Dhinaca kale, Kiolen ayaa mas'uul ka ah kala goynta Iswiidhan iyo Norway, buuraha Dofrines waxay kala qaybiyaan Norwey halka Tuliyaanku ku sugan yihiin gobolka koonfureed. Waxaas oo dhami waa qayb ka mid ah kala duwanaanta buuraha Scandinavia ee jiray 400 milyan oo sano ka hor. Xadka buuraha ee hadda jira ee sameeya Alps-ka Scandinavia waxaa la sameeyay sababtoo ah isku dhaca u dhexeeya taarikada qaaradaha ee Waqooyiga Ameerika iyo Baltiga. Waxaas oo dhami waxay dhaceen qiyaastii 70 milyan oo sano ka hor.
Alps-ka Scandinavian-ka uma istaagin dhererkooda, laakiin waxay u soo baxeen quruxdooda iyo hodantinimada ay ku leeyihiin noolaha. Meelaha ugu sarreeya waa Buuraha Glittertind, oo dhererkoodu yahay 2452 mitir, iyo Galdhøpiggen, oo dhererkoodu yahay 2469 mitir, labadaba dhulka Norway. Magaca Jasiiraddu wuxuu ka yimid Scania oo ah erey qadiimi ah oo Roomaanku ugu isticmaali jireen waraaqaha safarkooda. Ereygan waxaa loola jeedaa wadamada Waqooyiga Yurub. Baaxaddiisu tahay 1850 Km waqooyi ilaa koonfur, 1320 m min bari ilaa galbeed iyo baaxad ka badan 750000 km oo wareeg ah, Tani waa gacanka ugu weyn qaaradda Yurub.
Alps-ka Iskandaneefiyanka iyo jasiiraddiisa
Jasiiradda oo dhan waxaa ku wareegsan biyo kala duwan. Dhinac, waxaan ka leenahay badda Barents qaybta woqooyi, Badda Woqooyi ee qaybta koonfur-galbeed oo ay ku jirto dariiqyada Kattegat iyo Skagerra ayaa lagu daray. Kattegat hubaal wuxuu caan ku noqday taxanaha Vikings ee aadka loo jecel yahay. Dhanka bari waxaa ka xiga badda Baltiga oo ay ka mid tahay Gacanka Bothnia halka galbeedka ay ka xigto badda Norway.
Gobolka oo dhan waxaa ku hareeraysan jasiiradda Gotland oo gashan jasiirado madax-bannaan oo Alland ah. Cuntada waa tan laga helo inta udhaxeysa Iswiidhan iyo Finland. Gobolkan oo dhami wuxuu hodan ku yahay birta, titanium iyo naxaas, waana sababta ay tan iyo wakhtiyadii horeba u hodan ku ahayd. Xeebaha Norway Saliid iyo gaas dabiici ah ayaa sidoo kale la helay. Joogitaanka keydadkaani waxay xiriir dhow la leeyihiin qaab dhismeedka qadiimiga ah ee taarikada tectonic iyo magma ee awood u yeeshay inuu dhex maro taarikada.
Alps-ka Iskandaneefiyanka iyo jasiirad dhan waxay leeyihiin dhul buuralay ah heer sare. Badh ka mid ah aagga waxa daboolay dhul buuro leh oo ka mid ahaa gaashaankii hore ee Baltiga. Gaashaanka Baltigu wax kale ma aha oo waa dhagax samaysmi asal ahaan ka soo bilaabmay qiyaastii 400 milyan oo sano ka hor taasna badiyaa waxay ahayd oo ay sameeyeen dhagxaanta metamorphic crystalline. Dhagxaantaan dhagaxa ah ee loo yaqaan 'metamorphic dhagaxyada' waxay ka yimaadeen natiijada qaboojinta oo la dedejiyey taasoo ka dhalatey magma laga eryey taarikada. Inta badan Iskandaneefiyanka Andes waxay ku yaalliin Norway, halka Iswiidhan dhammaan meelaha buuraleyda ah ay ku urursan yihiin galbeedka dalka. Dhinaca kale, meelaha ugu sarreeya ee Finland waa kuwa dhererkoodu hooseeyo.
Xiisad ahaan, jasiiraddan waxay leedahay qaabab badan oo juquraafi ahaaneed oo ay ka mid yihiin xeebaha, baraf-biyoodka, harooyinka iyo fjords. Fjords waa qaabeeya V maxaa yeelay waxaa abuuray nabaad guur baraf ah waxaana degay qaababka badda. Fjords-ka Norway waa kuwa ugu astaanta iyo kuwa laga arki karo taxanaha Viking. Haddii aan aadno waqooyi-galbeed ee gobolka, waxaan arki karnaa Alps-ka Scandinavian-ka oo sidoo kale loogu yeero buuro ka sarreeya 2000 mitir. Iyaga looma yaqaan oo keliya dhererkooda, laakiin sidoo kale waa calaamado tilmaamaya woqooyiga xadka u dhexeeya Norway, Sweden iyo Finland.
Waxa jira in ka badan 130 buurood oo dherarkoodu ka badan yahay 2.000 oo mitir. Waxaa loo qaybiyaa 7 meelood oo loo yaqaan: Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell, Rondane, Sarek iyo Kebnekaise. Buuraha badankood waxay ku urursan yihiin Jotunheimen, Koonfurta Norway.
Alps-yada isdabajooga ah
Aan aragno kuwa ugu waaweyn Alps-ka Scandinavia marka loo eego dhulka.
Meelaha ugu sarreeya ee dhammaan jasiiradda Scandinavianka waa Norwey. Dhab ahaan, tobanka buurood ee ugu sareeya waxaana loo qaybiyaa inta udhaxeysa degmooyinka Oppland iyo Song og Fjordane. Mount Galdhøpiggen, oo ah 2469 m, waa tan ugu sareysa Norway iyo Jasiiradda Scandinavia. Meesha labaad waxaa ku fadhiya Mount Glittertind oo leh 2465 m meesha ugu sareysa. Kahor intaan loo tixgelin meesha ugu sarreysa, laakiin waa sababta oo ah cabbiraadaha la sameeyay waxaa lagu tiriyay glacier ka sarreeyay dusha sare ee dabiiciga ah. Sanadihii la soo dhaafey glacier-ka ayaa dhalaalayey waxaana horeyba u suurtagashay in la dhiso cabirrada oo si wanaagsan loo dalbado.
Iswidhan gudaheeda waxa ku yaal 12 korar oo dhererkoodu ka badan yahay 2000 mitir. Intooda badana waxaa laga helaa Beerta Qaranka Sarek iyo waqooyiga gobolka Kebnekaise wuxuu muujiyaa heerka ugu sarreeya ee Kebnekaise oo leh mitir dhan 2103. Waa meesha ugu sarreysa iyada oo la tixgelinayo dhammaan barafka daboolaya. Haddii barafkan uusan joogi lahayn, meesha ugu sarreysa waxay noqon laheyd Kebnekaise Nordtoppen
Haddaan tagno meelaha ugu sarreeya ee Finland, dhammaantood dhammaantood waxay ka hooseeyaan 1500 mitir oo joogga kuwa ugu caansan-na waxay ku yaalliin Finnish Lapland. Halkan ayaa taagan Mount Halti dhererkiisu waa 1324 mitir waana kan ugu sareeya. Waxay ku taalaa Noorway waxayna la wadaagtaa qaab dhismeed buuraley ah, Finland.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Alps-ka Scandinavia iyo astaamaha lagu garto.
Wali ma lihid xarun cimilo?
Haddii aad jeceshahay adduunka saadaasha hawada, hel mid ka mid ah saldhigyada cimilada ee aan kugula talineyno kana faa'iideyso dalabyada la heli karo:
Saldhigyada saadaasha hawada
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Alps-ka Iskandaneefiyanka
Da 'baraf yar